Shirka Midowga Afrika oo furmaya iyo dalal badan oo ka qeybgalaya - Iftiin FM
by Iftiin FM Reporter May 25, 2022
Magaalada Malabo ee dalka Equatorial Guinea ayaa waxaa lagu wadaa in uu ka bilowdo shir madaxeedka Midowga Afrika oo diiradda llagu saaraya arrimaha argagixisanimada iyo isbedelada aan dastuuriga ahayn ee dowladda.
Axmed Madoobe oo xilka ka qaaday Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan.
Hey'adda IOM oo sheegtay in 74 muhaajiriin ah ay ku dhinteen badda Libya.
Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay shirkii Dhuusamareeb.
Toogosho ka dhacday dalka Mareykanka
Dowladda Galmudug oo gacanta ku dhigtay rag lagu eedeyay falal Amni darro
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo diyaar uu ah in uu wadahadallo la galo Xisbiyada Mucaaradka